तपाईले रातो केरा देख्नुभएको छ ? खान जाने प्रेसर, क्यान्सर, मुटु रोगबाट बचाउछ – Krazy NepaL
March 9, 2021 491
काठमाडौं । हामीले प्रायः सबै पहेंलो र हरीयो केरा देखेका वा खाएका छौँ । तर के तपाईंले कहिल्यै रातो केरा खानु भएको छ ? अझ भनौँ न देख्नुभएको छ ? रातो रंगको केरा अष्ट्रेलियामा पाइन्छ ।अष्ट्रेलिया बाहेक यो वेस्टइन्डीज, मेक्सिको र अमेरिकाको केही भागहरूमा उत्पादन गरिन्छ । केरा एक फल हो जुन विश्वव्यापी रूपमा उपलब्ध हुन्छ । केरा मन नपर्ने मान्छेहरु सायदै होलान । यद्यपि रातो केरा नेपामला खास लोकप्रिय छैन । तर रातो केरामा पोषक तत्वको उच्च मात्रामा पाइन्छ ।
Nextतातो पानी पिउने बानी छ एकचोटी अवश्य पढ्नुहोस् !